प्रचण्ड समुहले सत्ता ढाल्न खोजे ओलीले कठोर कदम चाल्ने , नेकपा दुर्घटना नजिक « Pathibhara Post
काठमाडौं, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अहिलेको विवादको केन्द्र कुनै खास एजेन्डाभन्दा पनि सत्ता नै देखिएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत पाँचजना सचिवालय सदस्यहरु कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न खोजिरहेका छन् । यसका लागि उनीहरुले योजनाबद्ध तरिकाले मोर्चाबन्दी गरी सक्रियता बढाउँदै लगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली कुनै हालतमा पदबाट राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् । बरु उनी कठोर कदम चालेर अगाडि बढ्ने तयारीमा छन् । ओली निकट नेताहरुले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको विषयबाट यही संकेत मिल्छ ।
आज परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेकपा एकता अप्ठ्यारोमा परेको सामाजिक सञ्जालमा लेखे । यसअघि उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अलावा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि पार्टी विभाजनको खतरामा रहेको देखि दुर्घटनाको खतरा समेत औल्याएर सामाजिक सञ्जालमा लेखिसकेका छन् ।
अब ओलीलाई कारबाही गर्ने या राजीनामा गर्न वाध्य पार्ने प्रचण्डसहितको नेताहरुको तयारी छ । तर, ओलीले जुनसुकै परिस्थितिको सामना गरेर भएपनि राजीनामा नदिने अडान राखेका छन् ।
नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा ओली र प्रचण्ड दुवै नेता एक अर्कालाई कारबाहीसम्म गर्ने तयारीमा छन् । सकेसम्म सहमतिको बिन्दु खोज्ने नभए कारबाहीको निर्णय गर्ने प्रचण्डको तयारी छ । ओली पनि प्रचण्डलगातका नेतालाई कारबाही सम्म गर्न तयारीमा जुटेका छन् । दुवैले कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरिसकेका छन् । यो भविष्यमा पार्टी फुट्ने परिस्थिति समेतको आँकलन गरी गरिएको परामर्शका रुपमा बुझिएको छ ।
सत्ताबाट दुईपटक हटाउने विरोधीको प्रयासलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विफल पारिसकेका छन् । यसमा उनको राजनीतिक अस्त्र फाल्न माहिर शैली पनि कारण हो ।
नेकपा एमालेको राजनीतिबाट आफूलाई चतुर नेताको रुपमा उभ्याएका छन् । त्यो शैली अहिले झन् बढी देखिएको छ । नेकपा विभाजन हुँदा उनले वामदेव गौतमलाई पेलेरै जाने रणनीति बनाएका थिए । त्यसमा उनी सफल भएनन् मात्र पार्टीभित्र दोस्रो शक्तिशाली नेताका रुपमा देखिए । पछि ओलीले उनै वामदेवको साथ लिएर नेकपा एमालेको अध्यक्ष बन्ने सफलता हासिल गरे । तर, वामदेव ओली निकटस्थहरुको अन्र्तघातको शिकार भएर बर्दियाबाट चुनाव हारे । जसले उनको प्रधानमन्त्री बन्ने या सरकारमा मन्त्री बन्ने सपना चकनाचुर पारिदियो ।
वामदेवलाई ओलीले विभिन्न आश्वासन दिएर टाढा हुन दिएनन् । नेकपाभित्र ओलीविरुद्ध सत्ता संकट आउँदा वामदेवलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव सारे । उनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिए ।
यसरी वामदेवका कारण ओलीविरुद्धको दुईपटकको सत्ता संकट टरेको थियो । ओलीले सचिवालयको बहुमत सदस्यबाट भएको घेराबन्दीलाई दुवैपटक तोडिदिए । पहिलोपटक उनले पार्टी विभाजनसम्मको धम्की दिए । त्यसका लागि संसदको अधिवेशन अन्त गर्न लगाएर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश समेत ल्याए । यसले नेकपाभित्र उनका विरोधीलाई पार्टी विभाजनको खतरा टार्न पछि हट्न वाध्य पारेको थियो ।
ओलीले अर्कोपटक वामदेवमार्फत् सहमतिको छ बुँदे प्रस्ताव ल्याउन लगाएर सत्ता संकट टारे । यो घटनाले उनीविरुद्धको घेराबन्दी तोडिएको थियो । उनले फालेको राजनीतिक अस्त्रले पार्टीभित्र र बाहिरका विरोधीहरु पटक पटक विफल हुनेगरेका छन् ।
ओलीले दोस्रोपटकको सत्ता संकट टार्न सहमतिमा सरकार र पार्टी संचालन गर्ने भनी निर्णय समेत गराए । तर, मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन र राजदूत नियुक्तिमा एकल निर्णय गरे । उनीविरुद्ध पार्टीभित्र घेराबन्दी भयो ।
ओलीले यतिबेला फेरि एकपछि अर्को राजनीतिक अस्त्र फालेका छन् । उनले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने बरु अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने बताएका छन् ।
पछिल्लो पटक ओली निकटस्थबाट दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव समेत आएको छ । कतिपयले सचिवालय पुर्नगठनको विषय राखेका छन् । वामदेवलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित रोजेको मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरे ।
माधव नेपाललाई भावी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखे । तर, सबै प्रस्तावहरुका बाबजुद यसपटक नेपाल र गौतम टसमस भएनन् ।
काठमाडाैं मंसिर १०, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला प्रधानमन्त्री
Kathmandu– Gai or Cow puja, Goru Puja or ox worship and Govardan Puja are being
प्रचण्ड र नेपालले विष्णु पौडेलमार्फत ओलीलाई पठाए संदेश !
काठमाडौं, २४ कार्तिक । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद झनै चुलिएको छ
प्रधानमन्त्रीज्यू, १० वर्ष अघि आफैँले लेखेको यो पत्र हेर्दा अहिले पश्चताप लाग्छ ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै पार्टीका नेताहरुले पार्टीको निर्णय